BKF Mmezi Ngwá Ọrụ. BKF Iweghachite Software.
DataNumen BKF Repair bụ kasị mma BKF mgbake ngwá ọrụ n'ụwa. Ọ nwere ike ịrụzi ndị rụrụ arụ BKF faịlị ma gbakee ọtụtụ data gị dị ka o kwere mee, si otú ahụ na-ebelata ọnwụ na nrụrụ aka na faịlụ.
4.90 / 5 (site na 1,452 votes)
Gịnị mere DataNumen BKF Repair?
Iweghachite bụ most njirimara dị mkpa nke a BKF ngwaahịa mgbake. Dabere na ule zuru oke anyị, DataNumen BKF Repair nwere ọnụọgụ mgbake kachasị mma, otu dị ka Iweghachite maka ndabere, ma dị mma karịa ndị ọ bụla ọzọ na-asọmpi n'ahịa! Dị ka ọnụahịa nke DataNumen BKF Repair dị ọnụ ala karịa nke Iweghachite maka ndabere, ngwaahịa anyị DataNumen BKF Repair nwere ọnụahịa / arụmọrụ kacha mma.
Mụtakwuo banyere otu DataNumen BKF Repair na-ese anwụrụ mpi
Achọrọ iji weghachi faịlụ Windows XP. Sọftụwia gị rụrụ ọrụ ebube ...
Aga m ekwusi ike!
Cabma Technology Laboratories
Emeela m ka ị tụrụ aro ma ọ rụọ ọrụ! Daalụ maka inyere m aka iweghachite ọrụ 10 afọ !!
Ezigbo onye nwe anyi,
Nevernind - nwetara ya ugbu a, njikọ bịara site na email kwa, nke ahụ wee rụọ ọrụ.
Main Akụkụ na DataNumen BKF Repair v2.9
Nkwado ịrụzi BKF faịlị ndị ejiri Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP na Server 2003 were kwado ndabere.
Nkwado ịrụzi BKF faịlụ ndị e kere na nsụgharị niile nke Veritas Backup Exec, n'okpuru Windows NT, Windows Server, Netware, OS / 2 ma ọ bụ Macintosh.
Nkwado iji weghachite dataset, olu, nhazi folda yana faịlị na BKF Archive.
Nkwado iji weghachite abịakọrọ BKF ebe nchekwa.
Nkwado ịrụzi BKF faịlụ dị na mgbasa ozi rụrụ arụ, dị ka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi otu ogbe BKF faịlụ.
Na-akwado iji weghachite ọtụtụ data na otutu BKF ebe nchekwa.
Nkwado ịrụzi BKF faịlụ buru ibu dị ka 16777216 TB (ntụgharị 17179869184 GB).
Enweghị ikike ikike nchịkwa chọrọ iji weghachi BKF faịlụ.
Nkwado ịchọta ma họrọ BKF faịlụ a ga-arụzi na kọmputa mpaghara.
Nkwado mwekota na Windows Explorer, yabụ ị nwere ike ịrụkwa a BKF faịlụ na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
iji DataNumen BKF Repair iji Nweta Nrụrụ Aka BKF Files
mgbe gị BKF faịlụ rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi n'ihi ọtụtụ ihe na ị nweghị ike iweghachi ha n'ụzọ ziri ezi, ị nwere ike iji DataNumen BKF Repair i scanomi ihe BKF faịlụ na-agbake dị ukwuu data ha ka o kwere mee.
Cheta na: Tupu na-agbake ọ bụla rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi BKF faịlụ na DataNumen BKF Repair, biko mechie Microsoft Backup Utility na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike gbanwee ya BKF faịlụ.
Họrọ rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi BKF faịlụ a ga-arụzi:
Nwere ike itinye ihe na BKF aha faịlụ ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ faịlụ.
Site na ndabara, DataNumen BKF Repair ga-agbake ihe na BKF faịlụ ma chekwaa ha na ndekọ aha xxxx_recovered, ebe xxxx bụ isi iyi BKF aha faịlụ. Ọmụmaatụ, maka faịlụ MyBackup.bkf , ndabara mmepụta ndekọ ga-MyBackup_recovered. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
Nwere ike itinye aha ndekọ aha ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ ndekọ na.
pịa bọtịnụ, na DataNumen BKF Repair ga start na-enyocha ma na-arụzi isi iyi ahụ BKF faịlụ. Ogwe ọganihu
Mgbe mmezi usoro, ọ bụrụ na isi iyi BKF Enwere ike idozi faịlụ ahụ nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe ndekọ MyBackup_recovered nwere ihe niile natara ihe na BKF faịlụ.
DataNumen BKF Repair 2.9 weputara na Disemba 18th, 2020
DataNumen BKF Repair A na-ahapụ 2.7 na November 4th, 2020
DataNumen BKF Repair A na-ahapụ 2.6 na November 18th, 2019
DataNumen BKF Repair A tọhapụrụ 2.5 na May 16th, 2019
Nkwado iji weghachite abịakọrọ BKF faịlụ.
DataNumen BKF Repair A tọhapụrụ 2.2 na August 17, 2013
Melite ndakọrịta na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ Windows 7 na 8.
DataNumen BKF Repair A tọhapụrụ 2.1 na Disemba 1, 2010
Melite ndakọrịta nke GUI.
Meziwanye nchọpụta njehie na ịrụ ọrụ mkpesa.
Meziwanye ojiji nke GUI.
Idozi ahụhụ na nhazi njehie nhazi.
DataNumen BKF Repair 2.0 wepụtara na Eprel 2, 2009
Degharịa ngwa niile na igwe nrụzi.
Redesign na GUI.
Idozi ahụhụ na nhazi faịlụ aha.
DataNumen BKF Repair A na-ahapụ 1.2 na July 5th, 2006
DataNumen BKF Repair A tọhapụrụ 1.0 na June 16, 2005
Ngwá ọrụ dị ike iji weghachite Microsoft ndabere rụrụ arụ (BKF) faịlụ.
Archive data mgbake ụlọ, tinyere ngwaọrụ mgbake maka nrụrụ aka Zip na ebe nchekwa SFX, RAR edebe ihe ochie, Unix TAR ebe nchekwa na Microsoft CAB ebe nchekwa.
Idozi na-agbake rụrụ arụ CAB ebe nchekwa.
Mmezi na-agbake rụrụ arụ Unix TAR ebe nchekwa.
Idozi na-agbake rụrụ arụ Zip na ntinye aka nke onwe (SFX).